manicure set Soo-saareyaasha iyo Warshad - Shiinaha soosaarayaasha manicure set
1. Qaabka loo xardhay qaabka loo yaqaan "Nail Clippers" ee loo yaqaan 'stylishly design', wuxuu taageeraa Jumlo jumlo ah.
2. Xirfadleyaasha Ciddiyaha Xirfadlaha ah, maahan oo kaliya qurux, laakiin sidoo kale wax ku ool ah.Made oo tayo sare leh oo birta birta ah material Maqaarka u fiican maqaarka, oo ku habboon qof walba.Waxay ku habboon tahay shaqaalaha manicure pedicure xirfadlayaasha ah
3. Qalabka ciddiyaha dharka lagu jeexjeexay oo ka samaysan Maaddooyin tayo sare leh, Qalabka Nailku waa mid casri ah, waara oo raaxo leh taabashada.
4. Qalabkan Nail Clippers-ka oo ay ku jiraan wax kasta oo aad ugu baahan tahay manicure iyo pedicure maalin kasta. Qalabka dhameystiran, si sahlan loo isticmaali karo.
5. Waxay ku habboon tahay adeegsiga xirfadeed ama adeegsiga guriga, Saloonka qurxinta, dukaanka manicure, dukaanka lugaha, iwm iyo dadka oo ay ku jiraan kuwa cusub, Oggolow habeynta.
6.Exterior oo ka sameysan leydi PU leydi madow ayaa umuuqda mid aad u qaas ah oo sir ka buuxa.
7.Made ka samaysan bir tayo sare leh, u oggolow ka-dilista Nabdoonaanta, Ka-hortagga nacasnimada iyo Yaree Khatarta Cudurka.
8.MUTIL-FunCTIONAL: Manicuring, Pedicuring, Anti-Acne, Exfoliating, Eyebrow Shaping
9. Si fudud loo qaado safarka guriga.
15pcs Set Manicure Professional Pedicure Kit ciddiyaha Qalabka Qalabka Daryeelka Qalabka Qalabka Qalabka
* Waxyaabaha Tayada Sare: Faylashayada ciddiyaha ayaa ka samaysan alaabada la casriyeeyay ee emery, taas oo deegaanka u wanaagsan,
ku siinaya ciddiyaha raaxada leh ee khibrad u leh.
* Naqshad khafiifsan: Faylashaan ciddiyaha miisaanka culus leh ayaa fudud oo ku habboon in la isticmaalo. Kaliya mari cadaadiska fudud waxaadna isla markiiba arki kartaa natiijooyin, laakiin ma foorari doonaan!
* Guddiyada Laba-geesoodka ah ee Emery: Kabaha ciddiyaha ahi waxay ku habboon yihiin ciddiyaha, cidiyaha, ciddiyaha dabiiciga ah, ciddiyaha looxa, been
ciddiyaha iyo wixii la mid ah looxyada emery ee laba-geesoodka ah.
* Sifiican loogu talagalay Salonyada Iyo Guriga: Kuwani feylasha xirfadeed ee tayada leh waxay ku siinayaan xal aad u fiican oo aad ku ilaalin karto quruxdaada quruxda badan, dabiiciga ah iyo kuwa been abuurka ah. Waxaad kuheli kartaa saloonyo xirfadeed iyo farshaxanka ciddiyaha DIY ee guriga.
IZLA 7 oo ku jirta 1 Ahama Qalabka Xaraashka Fudud ee Nadiifinta ah ee Qalabka Manicure & Qalabka Pedicure Xirfadlaha Cidiyaha Cilladaha Qalabka Qalabka Daryeelka Pedicure ee Safarka ama Guriga
SHAQADA BADAN 7 QODOBKA GUUD EE FARSAMADA: Qalabka loo yaqaan 'manicure set' wuxuu udub dhexaad u yahay jarista ciddiyaha, qalab kasta waxaa loo sameeyay si ballaadhan oo wuxuu dabooli karaa dhammaan noocyada daryeel ee nolol maalmeedkaaga, mid gacanta ku jira, oo deggan oo deggan
100% Qalabka Nalalka ah ee Tayada Sare: Qalabka Manicure iyo Pedicure waxay ka samaysan yihiin Bir Daxal ah, Qalabkani waa mid xoogan oo loo dhisay ugu dambayn ， kaas oo u oggolaanaya nadiifinta nadiifka ah, ka hortagga daxalka iyo yareynta halista infekshinnada.
Safarka Kiiska Maqaarka La Qaadan Karo ： Ma rabtaa inaad yeelato go an manicure set oo aan boos ka banaanaynin marka aad safreyso ama guriga ku joogto Qalabka IZLA ee loo yaqaan 'IZLA pedicure set' oo loogu talagalay cabir muuqaal ah, waxaad ku ridi kartaa meel kasta oo aad rabto, sida boorsada gacanta, baabuurka, shandadaha, xafiiska iyo wixii la mid ah, oo ku fiican safarka ama guriga.
Hadiyadda ugu fiican: Qalabka Manicure wuxuu ku yimaadaa naqshad baakad qurux badan. Kiisku wuxuu ka samaysan yahay dhar tayo sare leh iyo maqaar PU, oo ah mid casri ah oo xarrago leh isla markaana ka dhigaya hadiyad weyn.
Ka Hortagga Khasaaraha suit Shandadda PU-maqaar waa la qaadi karaa oo si fudud ayaa loogu furi karaa hal riix oo badhanka ah, kaas oo hubaal ilaalin kara, kaydin kara qalabkaaga kana ilaalin kara inay lumiyaan.